Ahoana ny fomba hitaterana atiny multimiafina tsiambaratelo? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Ahoana ny fomba hitaterana atiny multimedia amin'ny tsiambaratelo?
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 736
Ao amin'ny sehatra Twitter, raha mijery ny User sary sy horonan-tsary Ao amin'ireo sioka izay heverinao fa tokony horaisina ho atiny miafina, araka ny Politikan'ny votoatin'ny Multimedia ao amin'ny Twitter, dia manana adidy sy zonao ianao hitory amin'ny Twitter.
Ny Mpampiasa, to miampanga Saripika sy horonan-tsary ao amin'ny Tweet, tsy maintsy: Mitadiava ilay Tweet tianao hotaterina ao amin'ny twitter.com na amin'ny fampiharana Twitter ho an'ny iOS na Android, kitiho; misafidy Report tweet, kitiho; safidio Ity bitsika ity dia misy sary tsiambaratelo, kitiho.
Ao amin'ny tambajotra sosialy Twitter ny tatitra an'ny Votoatin'ny Multimedia nomarihin'ireo Mpampiasa mba hamaritana raha toa ka mila hafatra fampitandremana izy ireo hanarahana ny Politikan'ny atiny Multimedia ao amin'ny Twitter.
Fehezo ny fijerena sary sy horonantsary miafina amin'ny sioka
Raha mikasa ny hanitsy ny toe-tsainy ny Mpampiasa Twitter Sary sy horonan-tsary amin'ny sioka; Voalohany, mila miditra ao amin'ny twitter.com ianao, mizaha ireo torolàlana amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny kisary PC anao sy ny fanarahana azy ireo.
Araka ny torolàlana, ny mpampiasa Twitter: Find the sakafo fanamoriana na ny sary famantarana ny Mombamomba anao, safidio ny Fikirana sy ny fiainanao manokana, kitiho; Ao amin'ny tsiambaratelo sy filaminana, kitiho; mifidy Security, kitiho; ary safidio Asehoy ny sary sy horonantsary izay mety misy fampahalalana tsiambaratelo, tehirizo.
Vita tamin'ny fomba fiasa, sy ny Mpampiasa nampahafantatra ny lampihazo Twitter mifandraika amin'ny Atiny toy izany. Hanisy saina azy ny Twitter, fa tsy hahazo hafatra fampitandremana ianao na hanaisotra azy tsy ho eo amin'ilay tranonkala. Antenaina fa halain'ny mpanoratra azy io.
NY traikefanao amin'ny TWITTER
Manolotra ny mpampiasa ny Twitter tontolo virtoaly tonga lafatra hizara hevitra sy fampahalalana manerantany; Noho io antony io, ity sehatra ity dia mampanantena fitaovana hifehezana ny zavatra hitan'ny mpampiasa Twitter sy izay hitan'ny olona hafa momba ny User.
Mba hahafahan'ny Mpampiasa maneho amin'ny fahatokiana Ao amin'ny Twitter dia tsy maintsy alaminao ireo fepetra mifandraika amin'ny sioka iray, toy ny: Tsindrio eo an-tampon'ny Tweet tianao, fidirana amin'ny safidy isan-karazany natolotry ny Twitter mivantana avy amin'ny vanim-potoana nanombohanao.
ireo safidy no tondroina a: Atsaharo ny fanarahana, fampandrenesana sivana, tsy dia fahita firy, ny moana, ny fanakanana, ny tatitra, fidio izay karazana atiny multimedia tianao ho hita ao amin'ireo sioka eo amin'ny sehatra.
Ahoana no hifehezana izay hitan'ny mpampiasa hafa momba ahy tao amin'ny Twitter?
Ireo mpampiasa Twitter dia manana fitaovana sy safidy isan-karazany ampanantenain'ny Twitter; miaraka amin'izany, ilay mpampiasa Twitter afaka mifehy izay hitan'ny mpampiasa hafa momba azy amin'ny resaka, fifampiresahana, sns.
Mba hifehezana, sosokevitra ny Mpampiasa arovy ny siokanao, ny mpanaraka anao ihany no hahita azy; tagy ny sary, manapaha hevitra raha mamela olona hanisy marika ny sarinao ianao, ny namanao ihany na tsy mpampiasa Twitter; fahitana, ovao ny kaonty kaonty mba tsy ho hita.
Afaka manapa-kevitra ny mpampiasa raha zarao ny toerana misy anao amin'ny sioka; Twitter dia manome anao safidy hisafidy isaky ny sioka raha te hampiditra ny toerana misy anao ianao; Eto dia tsy maintsy dinihinao ny mety tsy fahafantarana ny mpanaraka anao rehetra, tokony hitandrina ianao.
1 Fehezo ny fijerena sary sy horonantsary miafina amin'ny sioka
2 NY traikefanao amin'ny TWITTER
3 Ahoana no hifehezana izay hitan'ny mpampiasa hafa momba ahy tao amin'ny Twitter?
Ahoana ny fametrahana ny pin ho an'ny sms ao amin'ny twitter?
Ahoana ny fomba hamonoana ny kaontiko amin'ny tranokala twitter?